राज्य मा पीसीबी लेआउट को नियम के हुन्? - चीन Fastpcba प्रौद्योगिकी
इमेल समर्थन pcba19@pcb-smt.net
समर्थन कल 0755-26978877
राज्य मा पीसीबी लेआउट को नियम के हुन्?
पीसीबी बोर्ड ताराहरु चलाउन सक्दैन महत्त्वपूर्ण कुराहरू एउटै हो। पीसीबी ताराहरु विद्युत schematics मा आधारित छ र तार तालिका र आवश्यक तार चौडाइ र दूरी लेआउट मुद्रित तार, ताराहरु साधारण निम्न नियम पालन गर्नुपर्छ:
1 प्रयोगको लागि आवश्यकताहरु सन्तुष्ट को परिसर मा, ताराहरु विधि चयन क्रम → पहिलो पत्र → multilayer एकल पत्र छ, कि, ताराहरु सरलीकृत गर्न सकिन्छ छ।
2. पीसीबी बोर्ड को नै पत्र मा संकेत एक र्याम्प वा चिल्लो संक्रमण संग निर्देशन परिवर्तन र झुकाव को अर्धव्यास बिजुली क्षेत्र एकाग्रता, संकेत प्रतिबिम्ब र अतिरिक्त प्रतिबाधा जोगिन, एक सानो राम्रो छ।
3. दुई जडान पैड बीच ताराहरु लेआउट सकेसम्म छोटो छ, र संवेदनशील संकेत र साना संकेत पहिलो जानुहोस्। ढिलाइ र साना संकेत को हस्तक्षेप कम गर्न। को ग्राउंडिंग लाइन ढाल अनुरूप क्षेत्रीय को इनपुट लाइन अर्को राखे गर्नुपर्छ; एउटै तह सञ्चालकको लेआउट वितरित गर्नुपर्छ। प्रत्येक तार मा प्रवाहकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत बोर्ड warpage रोक्न सन्तुलित हुनुपर्छ।
प्रत्येक अन्य हस्तक्षेप गर्न ताकि4डिजिटल सर्किट र एनालग सर्किट ताराहरु मा अलग हुनुपर्छ।
5 को Pcba बोर्ड मा सर्किट घटक ढाकिएको र बिजुली आपूर्ति जडान भएका छन् जब निशान सकेसम्म छोटो र रूपमा पीसीबी बोर्ड को आन्तरिक प्रतिरोध कम गर्न सकेसम्म नजिक हुनुपर्छ।
6 यस्तो धेरै म / हे रेखा र अंतर एम्पलीफायरों र सन्तुलित एम्पलीफायरों रूपमा उच्च गतिको सर्किट, को म / हे लाइनको लम्बाईहरू, बराबर हुनुपर्छ। अनावश्यक ढिलाइ वा चरण पारी बच्न।
7 को multilayer बोर्ड प्रत्येक तह मा निशान को युग्मन कम गर्न प्रत्येक अन्य लम्ब हुनुपर्छ। पङ्क्तिबद्ध र माथिल्लो र तल्लो तहहरू को ब्यालेन्स जोगिन।
8 प्याड ठूलो र सानो क्षेत्र को प्रवाहकीय क्षेत्र संग जोडिएको बेला छ, यो भन्दा कम 0.5mm को एक लम्बाइ संग पातलो तार संग पृथक गर्नुपर्छ। को पातलो तार को चौडाई 0.13mm भन्दा कम हुनु हुँदैन।
9 मुद्रित सर्किट बोर्ड को किनारा गर्न घनिष्ठ वायर मुद्रण सर्किट बोर्ड को किनारा बाट 5mm भन्दा ठूलो हुनुपर्छ। आवश्यक जब जमीन तार बोर्ड को किनारा नजिक हुन सक्छ। एक पुस्तिका रेल छापिएको सर्किट बोर्ड को प्रक्रिया समयमा सम्मिलित छ भने, तार र बोर्ड बीच दूरी पुस्तिका रेल को गहिराई भन्दा कम्तिमा ठूलो हुनुपर्दछ।
FASTPCBA प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड चीन, शेन्जेन एक पेशेवर पीसीबी निर्माता छ। विकास को 14 वर्ष संग, FASPCBA HDI छ पीसीबी को पहिलो वर्ग निर्माता मा, उत्तेजित गर्दछ उत्पादन क्षमता तपाईंलाई थप जान्न चाहनुहुन्छ 35,000 वर्ग meters.If पीसीबी , कृपया सम्पर्क गर्नुहोस्: pcba06@pcb-smt.net
पोस्ट समय: अगस्ट-27-2018